ကိုးကားအချက်အလက်များအရ ကရင်လူမျိုးများသည် ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံ လူဦးရေ၏ (၁၀) ရာခိုင်နှုန်း ဝန်းကျင် ရှိသည်ဟုသိရသည်။ ပထဝီအနေအထားအရ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပြည်နယ် (၇) ခုနှင့် တိုင်းဒေသကြီး (၇) ခုအနက် ပြည်နယ် (၂) ခု (ကရင်နှင့် မွန်) နှင့် တိုင်းဒေသကြီး (၄) ခု (ဧရာဝတီ၊ ရန်ကုန်၊ ပဲခူးနှင့် တနင်္သာရီ) တို့တွင် ကရင်လူမျိုးများ အများအပြား နေထိုင်လျက်ရှိသည်။ ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံအတွင်း နေထိုင်သော ကရင်လူမျိုးများရှိသလို ထိုင်း - မြန်မာ နယ်စပ် တလျှောက်တွင် တော်လှန်ရေး လက်နက်ကိုင်များ၊ နိုင်ငံရေး တက်ကြွလှုပ်ရှားသူများ၊ ဒုက္ခသည်များနှင့် ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားများအဖြစ် နေထိုင်ကြသည့် ကရင်လူမျိုးများလည်းရှိသည်။ လူမှုရေး၊ စီးပွားရေးနှင့် နိုင်ငံရေး အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ကမ္ဘာတဝန်းရှိ နိုင်ငံအနှံ့အပြားတွင် အခြေချနေထိုင်လျက်ရှိသော ကရင်လူမျိုးများလည်း ရှိပါသေးသည်။ ကရင်လူမျိုးများအားလုံး၏ တူညီသောအချက်မှာ မိမိလူမျိုး၊ မိမိယဉ်ကျေးမှုနှင့် မိမိတို့၏ မွေးရပ်မြေကို ချစ်မြတ်နိုးခြင်းပင်ဖြစ်ပါသည်။ ဘယ်နေရာပဲ ရောက်ရောက် မွေးရပ်မြေရှိ ကရင်လူမျိုးများ အေးချမ်းသာယာရေးအတွက် မိမိတွင် တာဝန်မကင်းဟု ခံယူကြသူချည်းသာ ဖြစ်သည်။ တစ်ဖက်တွင်လည်း ဘဝအတွေ့အကြုံများ၊ ပတ်ဝန်းကျင်း နောက်ခံ အခြေအနေများ မတူညီကြသည့်အတွက် ကရင်လူမျိုးများအကြား အခြားသော တိုင်းရင်းသား လူမျိုးများစွာနှင့် မျှဝေနေထိုင်လျက်ရှိသည့် အမိမြေတွင် ရေရှည်တည်တံ့သော ငြိမ်းချမ်းရေးရရှိရေးနှင့် မိမိတို့လူမျိုးများ ဖွံ့ဖြိုးရေးတို့ကို မည်သို့ဖော်ဆောင်သင့်သည်ဆိုသည့်အပေါ် အမြင်များများစွာ ကွဲပြား ခြားနားလျက်ရှိသည်။
ကရင်လူမျိုးအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်သည့် ကရင်အမျိုးသား အစည်းအရုံး (KNU) သည် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်နှင့် ကိုယ်ပိုင်ပြဌာန်းခွင့်အတွက် လွန်ခဲ့သည့် နှစ်ပေါင်း (၇၀) ကျော် နှစ်လုံးလုံး လက်နက်စွဲကိုင်တော်လှန်ခဲ့ကြသည့် နည်းလမ်းကို ရွေးချယ်ခဲ့သည်မှာ အများသိပြီး ဖြစ်ပါသည်။ ကရင်လူမျိုးများအားလုံး KNU သို့ ဝင်ရောက်ခြင်း မရှိသည့်တိုင် ကရင်လူမျိုးအများစုအကြား အတိုင်းအတာ အမျိုးမျိုးဖြင့် KNU အား ကူညီမှု၊ ထောက်ခံမှုများ ရှိခဲ့ကြပါသည်။ KNU နှင့် အစိုးရတို့အကြား အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး ကြိုးစားမှုများစွာ လုပ်ခဲ့သော်လည်း မအောင်မြင်ခြင်း (သို့) အဖွဲ့ခွဲများ ကွဲထွက်သွားခြင်းဖြင့်သာ အဆုံးသတ်ခဲ့ရပါသည်။ လက်ရှိအချိန်တွင် မတူညီသော အုပ်စုခွဲ (၄) ခုရှိနေပြီး ယင်းတို့မှာ အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး သဘောတူညီချက်ရရန် ကြိုးပမ်းနေသူများ၊ အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးသတ်မှတ်ချက်များကို ထိန်းသိမ်းရန် အပြင်းအထန် ကြိုးစားလျက်ရှိသေးသူများ၊ ပြီးခဲ့သည့် အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး သဘောတူညီချက်အား ချိုးဖောက် ခဲ့သူများနှင့် အစိုးရစစ်တပ်ထဲသို့ ပေါင်းစည်းဝင်ရောက်သွားသူများ ဖြစ်ကြသည်။ ယင်းမှာ ရိုးရိုးရှင်းရှင်း ယေဘူယျဆန်စွာ ခွဲခြားခြင်းဖြစ်ပြီး ဤအုပ်စုခွဲ (၄) စုအတွင်း လုံးလုံးလျားလျား မကျရောက်ဘဲ ကြားတွင် ဝေဝါးနေသော မီးခိုးရောင် အစိတ်အပိုင်းများ များစွာရှိနေသေးသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပြည်နယ်/တိုင်း (၆) ခုတွင် နေထိုင်နေကြသော ကရင်လူမျိုးများအကြား ရေမြေဒေသ ကိုယ်ပိုင်လက္ခဏာ၊ ဘာသာစကား၊ ကိုးကွယ်ယုံကြည်မှုနှင့် နိုင်ငံရေး တိမ်းညွတ်မှု စသည်တို့တွင် ကွယ်ပြားခြားနားမှု ရှိနေသည်။ အဓိက ကရင်ဘာသာစကား မျိုးကွဲ အနည်းဆုံး (၁၁) ခု၊ ကိုးကွယ်ရာ ဘာသာ (၂) ခုနှင့် နိုင်ငံရေးပါတီ ရပ်တည်ချက်များစွာ ရှိနေသည်။ လက်ရှိအချိန်တွင် မှတ်ပုံတင် ထားသော နိုင်ငံရေး ပါတီ (၄) ခုရှိပြီး အသစ်ဖွဲ့စည်းနိုင်သည့် (သို့) ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းရန် အလားအလာရှိ ပါတီများလည်း များစွာရှိသည်။ ထို့အပြင် တိုင်းရင်းသား စည်းလုံးညီညွတ်ရေးပါတီနှင့် ပြည်ထောင်စု ကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီတို့ကဲ့သို့ နိုင်ငံ၏ အင်အားကြီးပါတီများတွင် လှုပ်ရှားနေသော ကရင် နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်များနှင့် ပါတီဝင်များလည်း အများအပြားရှိသည်။
လက်ရှိ နိုင်ငံရေးအခြေအနေအပြောင်းအလဲနှင့် အသစ်တက်လာသော အစိုးရ၏ ဒီမိုကရေစီ ပြောင်းလဲမှုအတွက် သိသာထင်ရှားသော ကြိုးစားမှုများအရ ခေါင်းဆောင်ပိုင်း၊ တာဝန်ရှိသူအပိုင်းတွင် ရှိနေသော ကရင်လူမျိုးများနှင့် ကရင်လူမျိုးမဟုတ်သူများ၊ ရပ်ရွာက ယုံကြည်အားကိုးသူများတွင် ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်မီ ကာလသည် အပြောင်းအလဲ ပြုလုပ်ရန် အရေးပါသော အချိန်ကာလ ဖြစ်သည်ဟူသော တူညီသည့် အမြင်ရှိထားကြသည်။ KNU အပါအဝင် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်းများသည် အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး သဘောတူညီချက်ရရှိရန် ကြိုးစားသင့်ကာ ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲများ ဆောင်ရွက်ရာတွင် တိုင်းရင်းသား လူထုအသိုက် အဝန်းများ တက်ကြွစွာ ပါဝင်သင့်ကြောင်း ကရင်လူမျိုးအများအပြားက လက်ခံထားသည်။ အခြေခံလူတန်းစား ကရင်လူမျိုးများ၊ အထူးသဖြင့် လက်နက်ကိုင် ပဋိပက္ခကြောင့် ထိခိုက်နစ်နာ လျက်ရှိသူများကလည်း အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး၊ လုံခြုံရေးနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးတို့ကို လိုလားကြောင်း ထုတ်ဖော်ထားကြသည်။ သူတို့သည် ကူညီထောက်ပံ့မှုများအပေါ် မမှီခိုဘဲ မိမိအသက်မွေးဝမ်း ကျောင်းကို မိမိဘာသာ ဦးဆောင်နိုင်သော ငြိမ်းချမ်းသည့် ပတ်ဝန်းကျင်ကို တောင့်တကြသည်။ အလွှာ အသီးသီးရှိ ကရင်လူမျိုးများအားလုံးသည်လည်း အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး စေ့စပ်ဆွေးနွေးမှု လုပ်ငန်းစဉ်အပေါ် စိတ်ဝင်စား၍ စိတ်အားတက်ကြွလျက်ရှိကာ ထိုလုပ်ငန်းစဉ် ပျက်တော့မယောင် ခြိမ်းခြောက်သည့် အခက်အခဲများ ကြုံရသည့်အခါ စိတ်ပျက်အားလျော့မိကြရသည်။
မတူညီသော အဖွဲ့အစည်းနှင့် ဒေသများမှ ကရင်လူမျိုးများကို စုစည်း၍ ဤအရေးကြီးသော လမ်းဆုံလမ်းခွအခြေအနေကို ဆွေးနွေးရန်အတွက် ပြည်တွင်းနှင့် ကော်သူးလေဒေသဟုခေါ်သော နယ်စပ်ဒေသမှ ကရင်ကိုယ်စားလှယ် (၅၀) ဦး ပါဝင်သော ပထမဆုံး ကနဦး အစည်းအဝေးကို ကရင်ပြည်နယ် ဘားအံမြို့ အင်္ဂလီကန် ဘုရားကျောင်း၊ Ancestor Hall ခန်းမတွင် ၂၀၁၃ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီ (၂၈) နှင့် (၂၉) ရက်၌ ကျင်းပခဲ့သည်။ ထိုအစည်းအဝေးတွင် အနာဂါတ်၌ ကရင်အမျိုးသား ညီလာခံကျင်းပရေးအတွက် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ဆွေးနွေးပြင်ဆင်နိုင်ရန် ကရင်လူမျိုးရေးရာ အစည်းအဝေး ကျင်းပပြုလုပ်ဖို့ “ကနဦး သဘောတူညီချက်” ရရှိခဲ့သည်။ ထိုအစည်းအဝေးတွင် ဆွေးနွေးရန် အောက်ပါအချက်များအား ဦးစားပေးကိစ္စရပ်များအဖြစ် ဤကနဦး အစည်းအဝေးတွင် ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည် -
၁။ ကရင်တစ်မျိုးသားလုံး စည်းလုံးညီညွတ်ရေး
၂။ ကရင်တစ်မျိုးသားလုံးနှင့် နိုင်ငံအတွက် ငြိမ်းချမ်းရေး
၃။ ကရင်လူမျိုးများ၏ အနာဂါတ်အပေါ် အလေးထားဆွေးနွေးမည့် ကရင် အမျိုးသား ညီလာခံ
ကရင်လူမျိုးရေးရာအစည်းအဝေးအတွက် ပြင်ဆင်ရန် နယ်စပ်ဒေသမှ (ခရစ်ယာန်ဘာသာရေး ခေါင်းဆောင်တစ်ဦး အပါအဝင်) ကိုယ်စားလှယ် (၃) ဦး၊ ကရင်ပြည်နယ်မှ (ဗုဒ္ဓဘာသာ ဘုန်းတော်ကြီး နှစ်ဦးအပါအဝင်) ကိုယ်စားလှယ် (၄) ဦး၊ ကရင်ပြည်နယ် ပြည်တွင်းပြည်ပမှ (ခရစ်ယာန် ဘာသာရေး ခေါင်းဆောင် တစ်ဦးအပါအဝင်) ကိုယ်စားလှယ် (၄) ဦးတို့ဖြင့် အဖွဲ့ဝင် (၁၁) ဦးပါဝင်သည့် လုပ်ငန်းအဖွဲ့ကို အစည်းအဝေးတွင် ဖွဲ့စည်းခဲ့ကာ ကရင်လူမျိုးရေးရာ အစည်းအဝေး ဖြစ်မြောက်ရေး လုပ်ငန်းအဖွဲ့ဟု အမည်ပေးခဲ့သည်။ ထိုလုပ်ငန်းအဖွဲ့တွင် ပါဝင်သော ပုဂ္ဂိုလ်များမှာ
၁။ အရှင် စန္ဒာဝရ - အဖွဲ့ ဥက္ကဌ
၄။ Fr. ဂျိုးဇက်သိန်းခင်
၅။ Rev. စောမက်သယူးအေး
၁၁။ နန့်ခင်အေးဦး တို့ဖြစ်သည်။